Umkhankaso wokulwa negciwane le-COVID-19 uthole ukwesekwa yinkampani yamabhasi eMajuba - Amajuba District Municipality
Umkhankaso wokulwa negciwane le-COVID-19 uthole ukwesekwa yinkampani yamabhasi eMajuba
UNdunankulu waKwaZulu-Natal uMnumzane Sihle Zikalala wemukele umnikelo oqhamuka enkampanini yamabhasi iTransnet eMajuba okuhloswe ngawo ukuphuthumisa umkhankaso wokuhlonza nokuhlolela igciwane iCOVID-19 eSifundeni Amajuba. Lolu xhaso lwamabhasi amabili asephendulwe imitholampilo engomahambanendlwana lwethulwe kuNdunankulu ngabamele uTransnet ngomhla zili-14 kuMay 2020 esibhedlela eMadadeni.
UMnumzane Sihle Zikalala ubephelezelwa wuMphathiswa wezeMpilo KwaZulu-Natal uNkosikazi Nomagugu Simelane-Zulu, uMeya woMkhandlu Amajuba uKhansela Dkt Musa Ngubane, amakhansela kanye namalunga e-COVID-19 District Command Team.
Lolu xhaso lulandela izingxoxo ebeziphakathi kukaMeya uNgubane kanye nabaphathi bakwaTransnet abatshengisa ukuba nentshisekelo yokuba yingxenye yomkhankaso wokulwisana naleli gciwane emva kokuba uMeya uNgubane ebachazele kabanzi ngohlelo nangemizamo kaHulumeni yokulwisana neCOVID-19. Babe sedlulisa isifiso sabo kuMeya uNgubane sokuthi bafisa ukuxhasa ngalamabhasi asenziwe ngobuchwepheshe ukuthi abe yimitholampilo engomahambanendlwana.
UMeya uNgubane emva kokube ezinike ithuba lokuhlola lamabhasi ube esethula lolu daba kuMphathiswa uSimelane-Zulu ukuze adlulise lesi sicelo kuNdunankulu nokuthi kulandelwe imigudu nemithetho ebekiwe yokumukela imixhaso evela ezinkampanini ezizimele.
UNdunankulu Sihle Zikalala usishayele ihlombe lesi senzo senkampani yakwaTransnet sokufaka isandla emkhankasweni obaluleke kangaka wokuhlenga izimpilo zabantu. “Sifisa ukubona kakhulu kwabakwaTransnet ngalolu xhaso. ESifundazweni saKwaZulu-Natal sesihlole abantu abangaphezu kwezinkulungwane ezingamashumi amane. La mabhasi azolekelela ukuthi sandise isibalo sabantu abahlolelwa leli gciwane ukuze silwisane nokusabalala kwalo”, kubeka uNdunankulu uZikalala.
UNgqongqoshe Simelane-Zulu ugcizelele ukuthi elinye lalamabhasi kuzokwenziwa izinhlelo zokuthi liyolekelela nakwezinye izifunda ezingomakhelwane baseMajuba ukuze lolu xhaso lakwaTransnet lulekelele nakwezinye izindawo.
NabakwaTransnet babonge kakhulu kuHulumeni waKwaZulu-Natal ukuthi abavumele ukuthi babe yingxenye yalempi ebhekiswe egciwaneni le-COVID-19.
UNdunankulu Sihle Zikalala emva kokumukela lo mnikelo ube esehlanganyela nabezomthetho ebebenesivimbamgwaqo eNewcastle. Kulesi sivimbamgwaqo bekuhlolwa abashayeli ukuthi bayayigcina yini imigomo le-Lockdown bephinde befundiswe ngegciwane le-COVID-19.